Alarobia: vehivavy iray hita faty teo akaikin’ny tetezana | NewsMada
Alarobia: vehivavy iray hita faty teo akaikin’ny tetezana
Par Taratra sur 19/11/2018
Vehivavy iray manodidina ny 51 taona no hita faty teny akaikin’ny tetezana Tsarasaotra Alarobia, omaly vao maraina. Nitsirara teo amin’ny lalana, nanao akanjo mihaja, izy io . Tsy nisy nahafantatra teny amin’ny manodidina anefa izy. Niantso ny polisy ny fokonolona ary tonga teny an-toerana izy ireo nanao ny fizahana ny razana.
Araka ny fanazavana azo, vehivavy tsy salama saina izy io, ary nitsoaka tany Antsirabe. Nalain’ny havany mipetraka eny Alarobia eny izy. Nihetsika tampoka ny aretiny ary nirifatra ka tsy hita intsony taorian’izay. Omaly maraina no hita ny razana, ary nahitana diana biriky ny lohany ka io no nitarika ny fahafatesany. Tsy fantatra na iza na iza namono azy.
Tanàna milamina ihany anefa ny eny Tsarasaotra Alarobia ka tsy misy loatra ny vonoan’olona. “Toy ny faritra rehetra ihany, misy tokoa ny fanendahana sns, fa ny famonoana, tahaka izao, aloha tsy misy loatra”, hoy ny mponina.
Andrasana ny tohin’ny fanadihadian’ny polisy momba azy ity. Efa nalefa eny amin’ny HJRA ny razana natao fizahana.